Saambiya - Gpedia, Your Encyclopedia
- Biyo (%) 1,6%
- qiyaas 17,3 inv/km² (163:e)
Saambiya ama Zaambiya, waa wadan oo kutaalo qaarada ee Afrika. Caasimada dalka Saambiya waa magaalada Lusaka.
Zambia (/ zæmbiə /), si rasmi ah Jamhuuriyadda Zambia, waa waddan aan la aqoon oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Afrika,  (inkasta oo ilaha qaarkood ay doorbidaan inay ka fiirsadaan qayb ka mid ah gobolka Bariga Afrika ) Congo, waqooyiga, Tansaaniya ilaa waqooyi-bari, Malawi oo ku yaalla bariga, Mozambique, Zimbabwe, Botswana iyo Namibiya, koonfurta, iyo Angola oo galbeed ah. Magaalada caasimadda waa Lusaka, qaybta koonfur-dhexe ee Zambia. Dadku waxay badanaa ku badan yihiin Lusaka ee koonfurta iyo gobolka Copperbelt ee waqooyi-galbeed, xarumaha dhaqaalaha ee dalka. Asal ahaantii degganaa dadwaynaha ku nool Tibaaxta, gobolku waxa saameeyay ballaarinta Bantu qarnigii saddex iyo tobnaad. Ka dib markii ay soo booqatay baarayaashii Yurub ee qarnigii siddeedaad, gobolku wuxuu noqday xuduudaha Ingiriiska ee Barotziland-Waqooyi-galbeedka Rhodesia iyo waqooyi bari Rhodesiya dhammaadkii qarnigii sagaalaad. Kuwani waxay ku biireen 1911 si ay u sameeyaan Waqooyiga Rhodesia. Inta badan wakhtiga gumeysiga, Zambia waxaa maamula maamul loo magacaabay London iyadoo la talinta shirkadda British South Africa. 24kii Oktoobar 1964, Zambia waxay ka madax banaaneyd Boqortooyada Ingiriiska, waxaana ra'iisul-wasaare Kenneth Kaunda noqday madaxwaynihii hore. Kauba oo ah xisbiga mucaaradka ah ee Qaranka ee Qaramada Midoobay (UNIP) ayaa kor u qaaday awooddii laga soo bilaabo 1964 ilaa 1991. Kaunda ayaa kaalin muhiim ah ka qaatay dibloomaasiyadda gobolka, oo si dhow ula shaqeyneysa Maraykanka si loo helo xalka dhibaatooyinka isku dhacyada ee Rhodesia (Zimbabwe), Angola, iyo Namibiya. ] Laga soo bilaabo 1972-kii illaa 1991kii Zambia waxay ahayd hal waddan oo UNIP ka ah iyada oo xisbiyada siyaasadeed ee keli ah ay hoos u dhigeen "One Zambia, One Nation". Kaunda waxaa ku guuleystay Frederick Chiluba oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa dimuquraadiga ah ee dimoqraadiyadda ee dhinacyada kala duwan ee dimoqraadiga ah 1991-kii, isagoo bilowday mudo kobcin bulsho-dhaqaale iyo baahinta xukunka dawladda. Levy Mwanawasa, oo ah beddelkii Chiluba ee la doortay, wuxuu ku hogaamiyay Zambia bishii Janaayo 2002 illaa uu geeriyooday bishii August 2008, waxaana lagu darsaday ololayaal lagu yareeyo musuqmaasuqa iyo kordhinta heerka nolosha. Ka dib markii Mwanawasa geeriyooday, Rupiah Banda ayaa loo doortay madaxweyne ka hor inta aan la dooran madaxweyne 2008-dii. Xafiiska oo muddo 3 sano ah haystay, Banda ayaa hoos u dhacay markii uu guuldaradii ka soo gaartay doorashadii 2011-kii ee hogaamiyaha xisbiga Waddaniga ah ee Michael Sata. Sata ayaa geeriyootay 28 October 2014, madaxweynaha labaad ee Zambia inuu ku dhinto xafiiska.  Guy Scott wuxuu si kooban u adeegsaday madaxweyne ku-meel-gaar ah illaa doorashooyin cusub la qabtay 20-kii Janaayo 2015,  kaas oo Edgar Lungu loo doortay madaxweynaha lixaad.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Saambiya&oldid=188544"